LibreOffice 6.4.6 inosvika iine anopfuura makumi manomwe mabhugi akagadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.4.6 inouya neanopfuura makumi manomwe bugs akagadziriswa uye yatove sarudzo yakanakisa kunyangwe kune vashandisi vakangwara
Nhasi vhiki uye zuva rapfuura, Iyo Gwaro Sisekelo yakakanda FreeOffice 7.0. Yakanga isiri iyo chete vhezheni yesarudzo yayo yakagadziridzwa, asi iyo hombe kuvandudza iyo yatovepo neakakosha maficha maficha, senge Skia mifananidzo injini, Vulkan GPU kumhanyisa kana kuwirirana kukuru neMicrosoft Office mafaera. Kunyangwe zvakadaro, iyo kambani haina kumira kuti ive isina hanya uye inopa imwe vhezheni ine zvishoma zvigadzirwa uye zvimwe zvakaratidza kuti vanokurudzira zvikwata zvekugadzira. Izvozvi, ndizvo LibreOffice 6.4.6.
Yakaziviswa nguva pfupi yapfuura, chikamu chitsva ichi chasvika gadzirisa zvikanganiso mune dzino zvakateedzana, vanopfuura makumi manomwe nguva ino. Gwaro reNheyo rinotokurudzira kuti vashandisi vev6.3.6, vanonyanya kungwarira, vatore kusvetuka, nekuti izvozvi, mushure memwedzi yakati wandei yekusimudzira, ndiyo sarudzo yakanakisa maererano nekusimba kwezvibereko zvinodiwa.
LibreOffice 6.4.6 ndiyo yatove vhezheni yakakurudzirwa yemunhu wese, kunze kwekushinga kwakanyanya
Pamwe ne LibreOffice 7.0.0, LibreOffice 6.4.6 yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti, iyo iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vanogona kurodha yavo DEB, RPM mapakeji kana mabhinari avo. Mumazuva anotevera, kugoverwa kweLinux kuchasanganisira iyi vhezheni seyekuvandudza, kunze kwekunge ichisarudza yazvino sarudzo, mune iyo v7.0.0 yenyika inozivikanwa kwazvo yemahara suite ichaonekwa. Iwo 6.3 akateedzana haafanire kugashira zvimwe zvekuvandudzwa uye, kunze kwekushamisika, LibreOffice 6.4.6 futi ichave yekupedzisira kugadzirisa mune dzino nhevedzano.
LibreOffice 6.4.0 llegó pakupera kwaNdira 2020 nenhau dzakadai sekubatanidzwa kwemamenyu ezvinyorwa zvemhando yepamusoro, nyowani yemunharaunda yekutsvaga injini yemapeji ekubatsira, kugona kubatanidza makomendi nemifananidzo kana chitsva mukati meiyo interface yaisanganisira QR kodhi jenareta, iyo inotibvumidza kuisa kodhi yekodhi yeQR mugwaro riine chinongedzo kana zvinyorwa zvekupokana zvinotsanangurwa nemushandisi, izvo zvinogona kuzokurumidza kuverenga kubva nharembozha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 6.4.6 inouya neanopfuura makumi manomwe bugs akagadziriswa uye yatove sarudzo yakanakisa kunyangwe kune vashandisi vakangwara